सोनम कपुरको बिहेमा दीपिका नजाने ! – हिमाल न्युज
सोनम कपुरको बिहेमा दीपिका नजाने !
बलिउड नायिकाद्वय दीपिका पादुकोण र सोनम कपुर आपसमा खुबै मिल्छन् । उनीहरु ‘कफी विथ करण सीजन ३’ मा सँगै सहभागी भएका थिए । यस क्रममा दीपिकाले आफ्नो एक्स ब्वाइफ्रेन्ड र सोनमले आफ्नो पहिलो को स्टार रणबीर कपुरको खुब मजाक उडाएका थिए ।
यी दुवै नायिका चाँडै विवाह वन्धनमा बाँधिदैछन् । सोनमको विवाह तिथि तय भइसकेको छ । उनले आफ्नो प्रेमी आनन्द आहुजासँग अर्को महिना बिहे गर्नेछिन् । यसैगरी दीपिकाले पनि आफ्नो प्रेमी रणवीर सिंहसँग विहे गर्न लागेको चर्चा चलिरहेको छ ।
यसैबीच सोनमको बिहेमा दीपिका सहभागी नहुने खबर आएको छ । बिवाहको निम्तो पाएपछि उनले आफू आउन नपाउने जानकारी गराएकी छिन् । मिल्ने साथीको विहेमा आउन नचाहनुको वास्तविक कारण खुल्न नसके पनि उनले आफ्नो व्यस्तताको बहाना बनाएकी छिन् ।
दीपिकाका प्रवक्ताका अनुसार उनी आगामी केही दिन निकै व्यस्त रहनेछिन् । उनलाई केही समारोहमा भाग लिन यूएस र फ्रान्स जानु छ । तर, व्यस्तताको बहाना गर्दै दीपिकाले सोनमको विहेलाई महत्व नदिएको प्रष्ट झल्किन्छ । अब दीपिकाको बिहेमा सोनमले के गर्छिन्, प्रतिक्षा गरौ ।
छोटो ड्रेसमा भल्गर प्रस्तुति दिने चन्दा भन्छिन-‘मलाइ प्लस...
‘पद्मावत’देखि ‘जिरो’सम्म, वर्षका महँगा फिल्म
लिलिबिलीको ट्रेलर रिलिज, प्रियंकालाई एक सेकेन्ड मात्र (ट्रेलरसहित)
रेसलरसँग निहुँ खोजेपछि राखी सावन्त अस्पताल भर्ना (भिडियोसहित)
कोमल ओलीको कार्यकाल चार वर्ष रहने
प्रदीपको ‘लभस्टेशन’ निरुता सिंह नखेल्ने, यस्तो छ कारण...
प्रताप दास र कविता नेपालीको पहिलो अन्तर्वार्ता |...
अमेरिकामा निकसँग प्रियंकाको विकिनी मस्ती
दिउँसो पढाउँथिन् राती गर्थिन् यस्तो काम, त्यसकारण स्कूलले...
हमाललाई ‘प्रेमगीत ३’बाट अफर, के बन्लान् प्रदिपका पिता...